दृष्टिविहीन विद्यार्थीको प्रश्न : गणित र विज्ञानमा चित्र कसरी बनाउने ? | Educationpati.com
दृष्टिविहीन विद्यार्थीको प्रश्न : गणित र विज्ञानमा चित्र कसरी बनाउने ?
२०७३ चैत्र ५ गते ००:२८मा प्रकाशित
बुटवल । रूपन्देही मणिग्रामस्थित गिर्वाण माविको एउटा कक्षामा विद्यार्थी नारायण थारू अंग्रेजी विषयको प्रश्न सुनेर उत्तर बताउँदै थिए। छेउमै बसेकी एउटी छात्राले उनको उत्तरपुस्तिकामा सरसर्ती लेखिरहेकी थिइन्।
बिहीबारदेखि सुरु भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) कोकेन्द्र रहेको गिर्वाणका अन्य कोठमा भइरहेको परीक्षाभन्दा त्यहाँको अवस्था फरक थियो। पाँच उत्तरपस्तिका र पाँच प्रश्नपत्र तर विद्यार्थी दसजना। मणिग्रामकै शान्ति नमुना माविमा अध्ययनरत दृष्टिविहीन विद्यार्थीको परीक्षा केन्द्र हो गिर्वाण मावि।
दुई छात्रा र तीनजना छात्रले सहयोगीमार्फत परीक्षा दिइरहेका छन्। ब्रेललिपिमा अध्ययन गरेका उनीहरू सोही लिपिमै परीक्षा दिने अवसर भने छैन। त्यसकारण तल्लो कक्षाका सहयोगीमार्फत उत्तर लेख्नुपरेको हो। ‘आफूले सोचेजसरी लेख्न नपाइँदो रहेछ, अंग्रेजी विषयको परीक्षा दिएर बाहिरिँदै गर्दा अर्का विद्यार्थी पुरन कुमालले भने, ‘नम्बर सोचेजस्तो नआउने पो हो कि ? ’ प्रश्नपत्र हात पर्नासाथ सहयोगीमार्फत सरर प्रश्न पढेपछि निकै सजिलो आएको उनलाई लाग्यो। तर लेख्दै जाँदा केही अपुग भएको महसुस भएको उनी बताँउछन्।
अक्षर लेख्नुपर्ने विषयमा सहयोगीबाटै पनि केही धेरै नम्बर आउने दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई विश्वास छ। तर चित्र कोर्नुपर्ने र प्राविधिक गणित र विज्ञान विषय निकै जटिल लागेको छ। शान्ति नमुनाकी दृष्टिविहीन छात्रा कल्पना न्यौपानेलाई गणितमा सोचेजति नम्बर आउँदैन कि भन्ने चिन्ता लागेको छ। ‘आफूले चित्र कोर्न सकिँदैन, नम्बर काटिन्छ होला’, उनले गुनासो गरिन्। गणित विषयमा २४÷२५ नम्बरको ज्यामितीबाट प्रश्न आउँछ। त्यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन धेरै दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई कठिन हुन्छ। तसर्थ उनीहरूले ब्रेललिपिमै परीक्षा दिन पाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
शिक्षकले ब्रेललिपिमै पढाउँछन। पढ्ने पुस्तक पनि केही मात्रामा बनिसकेका छन्। तर आफ्नो योग्यता देखाउने बेला निरीहजस्तै बन्नुपरेकोमा उनीहरूलाई चिन्ता छ। धारणा बनाएर परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीलाई प्राविधिक विषय झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। विगतका नतिजामा दृष्टिविहीनहरूको गणित र विज्ञानमा कम नम्बर आउने गरेको शान्ति नमुना माविका प्राधानाध्यापक कुलप्रसाद लामिछानेले बताए। ‘ज्यामिती निकै गाह्रो हुन्छ। हामीले पढाउँदा शैक्षिक सामग्री छुन दिने गरेका छौं तर चित्र स्मरण गर्न कठिन हुँदो रहेछ’, उनले भने।
शान्ति नमुनाबाट अहिलेसम्म ५५ जना विद्यार्थीले माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेका छन्। गणित र विज्ञानमा कम नम्बर आए पनि धेरैजसोको प्रथम श्रेणी आउने गरेको छ। दृष्टिविहीनलाई छुट्टै कक्षाकोठा र थप समय उपलब्ध गराइएको रूपन्देहीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी टेकबहादुर थापाले बताए। माध्यमिक परीक्षामा जिल्लाबाट सहभागी १८ हजार दुई सय पाँच जनामध्ये पाँच दृष्टिविहीन र आठजना सुस्त श्रवण क्षमताका विद्यार्थी हुन्। अन्नपुर्णपोष्टमा खबर छ ।